R Nirina, Auteur à déliremadagascar · Page 112 de 118
Auteur R Nirina
Socio-eco	 22 novembre 2016 R Nirina
VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE : Tsy nahasakana ny famitana azy ny fanakianana.
Nigadona androany ihany ny andro voalohany handraisan’i Madagasikara ny Fihaonana an-tampony ny firenena mampiasa ny teny frantsay. Voatokana ihany ny « village de la Francophonie » eny Andohatapenaka, na dia betsaka aza ny fanakianana isan-karazany. Tsy nahasakana ny frankofonia ho tanteraka eto Antananarivo izany.
Ity vao tanteraka ilay fomba fiteny hoe : « manao zavatra tsy mora ». Ny alina mialoha ny frankofonia vao notokanana ny « village de la francophonie ».
Tonga teny Andohatapenaka nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena, Hery RAJAONARIMAMPIANINA, ny Sekretera jeneralin’ny OIF, Michaelle Jean, ny Lehiben’ny Governemanta, ny Filohan’ny parlemanta roa tonta…
VIMA: Varavarana misokatra ho an’ny orinasa ny « village de la francophonie ».
Anterivava: Zouzar BOUKA
“Fotoana manan-danja ho an’i Madagasikara ny fandraisana ny fihaonana an-tampony ny frankofonia”. Nambaran’ny Filoha mpanorina ny orinasa VIMA, Zouzar BOUKA fa varavarana ahafahan’ny orinasa eto Madagasikara misandrahaka any ivelany io fivoriana io. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 novembre 2016 R Nirina
MARIE STOPES: Raim-pianakaviana 2780 namatotra ny fantson’ny filahiany.
Fomba fanabeazana aizana natao ho an’ny lehilahy ny “Vasectomie”. Natokana ho an’ny ireo mpivady tsy maniry ny hiteraka intsony satria efa ampy ny isan-jaza ilaina. Raha ho an’ny ny toeram-pitsaboana Marie Stopes, nanomboka tamin’ny 2006 no mankaty dia raim-pianakaviana miisa 2780 no resy lahatra ka nampiasa ity fomba fandrindram-piterahana ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 19 novembre 2016 R Nirina
LALAN’NY FRANKOFONIA : Notokanana ihany na dia tsy vita hatramin’ny farany aza.
Misokatra ho an’ny rehetra ny lalana mampitohy an’ Ankasina sy ny lalana mankany Ivato. Etsy ankilany, entina hanamorana ny fifamoivoizana mandritra ny fihaonana an-tampony ny firenena mampiasa ny teny Frantsay eto Antananarivo no tena antony nanamboarana azy ity. Lalana mirefy 4, 759 km. Ny orinasa sinoa CRBC no nanamboatra izany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 18 novembre 2016 R Nirina
CNTEMAD: Tsy voatery mandeha lavitra vao afaka mandranto fianarana ambony.
Efa nivoaka ny vali-panadinana enim-bolana voalohany ny Ivom-pampianarana fampitan-davitra CNTEMAD. Araka ny fanazavan’ny Tale Nasionaly, Djohary ANDRIANAMBININA fa nahafa-po tokoa vokatra raha ny taham-pahafahana no jerena. Continuer la lecture →